Jesus redeemed us from sin and death through His blood sacrifice – The Life of Yeshu
Jesus redeemed us from sin and death through His blood sacrifice
येशू उद्धार गरियो हामीलाई बाट पाप र मृत्यु वारपार उनको रगत बलि चढाउनु
1 पत्रुस 1:18-21
18 तिमीहरू जान्दछौ कि विगत समयमा तिमीहरू लक्ष्यहीन भई बाँचेका थियौ। तिमीहरूले त्यस तरिकाले जीवित रहने कुरा ती मानिसहरूबाट सिक्यौ जो तिमीहरू भन्दा अघि बाँचिरहेका थिए। तर तिमीहरूलाई त्यस तरिकाले बाँच्नबाट बँचाइयो। तिमीहरू किनियौ ती वस्तुहरूद्वारा होइन जो सुन वा चाँदी जस्तै नष्ट हुन्छ।
19 तर तिमीहरू ख्रीष्टको बहुमूल्य रगतले किनियौ, जो दोषरहित भेंड़ाको पाठो हुनुहुन्छ।
20 विश्व निर्माण अघि नै ख्रीष्ट चुनिनु भएको थियो। तर तिमीहरूको लागि यो अन्तिम समयमा उहाँलाई संसारमा चिनाइयो।
21 ख्रीष्टद्वारा तिमीहरू परमेश्वरमाथि विश्वास गर्छौ। परमेश्वरले ख्रीष्टलाई मृत्युबाट बौरी उठाए। तब परमेश्वरले उहाँलाई महिमा दिनु भयो। यसर्थ तिमीहरूको विश्वास अनि आशा परमेश्वरमा छ।
Peter’s explanation of the salvation plan of God brings us back to history all the way back to creation and at the same time looking forward our future with Jesus.
पत्रुसको व्याख्या को द पापबाट बचाउने काम योजना को यहोवा हामीलाई फिर्ता ल्याउनुहोस् इतिहास निर्माण र एउटै समय अगाडि हेर्दै हाम्रो भविष्य योजनाहरू संग जीसस क्राइष्ट
The first man and woman were living in the presence of God and enjoying the full blessing of life.
पुरुष र स्त्री द्वारा निर्मित यहोवा
सँगै बस्दै यहोवा
तर अपराध अलग मानव र यहोवा
15 तब परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई लानु भयो अनि बगैंचा खन-जोत अनि हेरचाह गर्न उसलाई राख्नु भयो।
16 परमप्रभु परमेश्वरले त्यस मानिसलाई आज्ञा दिनु भयो। परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, “तिमीले कुनै चिन्ता बिना यस बगैंचाको कुनै पनि रुखबाट फलहरू खान सक्छौ।
17 तर तिमीले त्यस रुखको कुनै फल खानु हुँदैन जसले असल र खराबको ज्ञान दिन्छ, किनभने जुन दिन तिमी त्यस रुखको फल खान्छौ निश्चयनै त्यस दिन तिमी आफैं मर्नेछौ।”
परमप्रभु परमेश्वरले सृष्टि गर्नु भएको सबै जन्तुहरू मध्ये सर्प अत्यन्त धूर्त थियो। सर्पले उसलाई सोध्यो, “ए नारी! के परमेश्वरले बगैंचामा कुनै पनि रुखबाट फल खानु हुँदैन भनी मनाही गर्नु भएको छ?”
पाप ल्याउँछ मृत्यु
तर यहोवा छोड्नु हुँदैन हामीलाई एक्लै मर्नु
जीसस क्राइष्ट आउनुभयो हामीलाई बचाऊ बाट पाप र मृत्यु
जीसस क्राइष्ट मा मर्नु रिसाएको हाम्रो लागि पाप
जीसस क्राइष्ट उद्धार गरियो हामीलाई बाट मृत्यु